जानकी मन्दिरमा मुख्यमन्त्रीको बोर्ड फेरी लगाउँछौ, कसैलाई ताकत भए हटाएर देखाओसः यादव
आज लालबाबु राउत छ त भोली अन्य जना हुन्छ । त्यसमा धार्मिक हिसाबले व्यवहार गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध थियो ।”
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का युवा नेता नविन यादवले मुख्यमन्त्रीको बोर्ड जानकी मन्दिर पुनः लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।
केही दिन अघि जनकपुरको विश्वप्रसिद्ध जानकी मन्दिर परिसरभित्र रहेको होडिँड बोर्डहरु हटाएकोप्रति प्रक्रिया दिँदै यादवले मुख्यमन्त्रीको बोर्ड च्योतेको र लात्तले हान्नु राजनीतिक प्रतिशोध मात्र दर्साएको बताए ।
नेकपा एमाले समर्थित युवाहरुले जानकी मन्दिरमा भएको होडिङग बोर्डहरु हटाएका थिए । सो क्रममा प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीको “बेटी पढाउ, बेटी बचाउ” अभियानको नारा सहितको होडिँड च्योतेको थियो ।
सो क्रममा उनीहरुले अन्य बोर्डहरुलाई साधारण रुपले सफाई गरेपनि मुख्यमन्त्रीको फोटो अँकित बोर्डलाई च्यातेर सामुहिक रुपमा लात्तले हानेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध मात्र भएको बताएका छन् ।
उनले भने,–“जानकी मन्दिर कसैको बपौटी हो त ? नत्र मुख्यमन्त्रीको कुर्शी नै कसैको बपौटी हो । आज लालबाबु राउत छ त भोली अन्य जना हुन्छ । त्यसमा धार्मिक हिसाबले व्यवहार गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध थियो ।”
जानकी मन्दिरमा एमालेका कार्यकर्ताहरुले देखाएको उच्छृँगल गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै नेता यादवले पुनः मुख्यमन्त्रीको बोर्ड झुण्डयाउने चेतावनी दिए । उनले भने–“कसैलाई ताकत छ भने फेरी पनि बोर्ड हटाएर देखाओस्, जनकपुरमा के हुन्छ उनीहरु आफैँ बुझछन् ।”
गत शनिबार दिउँसो एमाले समर्थित सरोज मिश्र लगायतका युवाहरुले जानकी मन्दिरभित्र रहेको मुख्यमन्त्रीको अभियानको होडिँग हटाएका थिए । उनीहरुले एक अर्को होडिँग बोर्ड झुण्डयाउँदै जानकी मन्दिर भित्र धार्मिक बाहेकका अन्य कुनै पनि बोर्ड नलगाउन तथा धार्मिक बाहेका अन्य कुनै पनि भिडियो नबनाउन आग्रह गरेका थिए ।
तर, जुन प्रकारले मुख्यमन्त्रीको होडिँड बोर्ड च्यातियो त्यो सँकिर्णता र राजनीतिक प्रतिशोध मात्र रहेको यादवले थपे । उनले अब लगाउने बोर्ड हटाउन चुनौति समेत दिएका छन् ।
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुरधामस्थित रहेको काव्या हस्पिटलको अगाडीबाटै एक जनाको मोटरसाईकल चोरी भएको छ । मँगलबार बिहान जनकपुरस्थित रहेको काव्या हस्पिटलको अगाडी पार्क गरि राखिएको मोटरसाईल चोरी भएको हो ।
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुरधामस्थित रहेको काव्या हस्पिटलको अगाडीबाटै एक जनाको मोटरसाईकल चोरी भएको छ ।
मँगलबार बिहान जनकपुरस्थित रहेको काव्या हस्पिटलको अगाडी पार्क गरि राखिएको मोटरसाईल चोरी भएको हो । मोटरसाईकल स्टेण्ड गरी हस्पिटलमा आफन्तको उपचारको लागि गएपछि मोटरसाईकल चोरी भएको हो ।
मोटरसाईकल चोरी गर्ने चोरको मुखडा समेत सिसिटिभी क्यामेरामा देखिएको छ । यद्यपी, स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा पनि प्रहरीले कुनै चासो नलिएको गाडी धनी साकिर हुसैनले जानकारी दिए ।
मगँलबार बिहान ज ८ प ८६०७ नम्बरको मोटरसाईकल हस्पिटल अगाडी पार्किङमा राखेर हस्पिटल छिरे लगत्तै मोटरसाईकल चोरी भएको हुसैनले जानकारी दिए ।
सिसिटिभीमा देखिए अनुसार, चोरी गर्ने युवकले मोटरसाईलको स्टार्टअपको तारलाई सर्ट सर्किट गरेर स्टार्ट गरी चोरेका छन् ।